Ciidamo ka tirsan AMISOM oo loo tababaray ilaalinta dadka rayidka ah - Wardeeq 24 TV Ciidamo ka tirsan AMISOM oo loo tababaray ilaalinta dadka rayidka ah Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidamo ka tirsan AMISOM oo loo tababaray ilaalinta dadka rayidka ah
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo loo tababaray ilaalinta dadka rayidka ah
Ciidamada Kenya ee ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ee ku sugan Kismaayo ayaa qaatay tababar dib -u -cusbooneysiin ah oo ku saabsan Ilaalinta Rayidka inta ay socdaan howlgallada milateri.
Tababarkan oo ku saabsanaa Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada, gaar ahaan ilaalinta haweenka iyo carruurta, tacaddiyada galmada ee la xiriira rabshadaha iyo xadgudubyada ku saleysan jinsiga, ayaa ahaa mid lagu xoojinayo aqoonta iyo xirfadaha ciidammada ee ku aaddan baahida loo qabo ilaalinta rayidka.
“Ujeeddada tababarkan ayaa ah in la hubiyo in ciidamadeennu ay sii wadaan arrimaha ilaalinta guud ee hawl -maalmeedkooda iyagoo ilaalinaya haweenka, carruurta iyo dhammaan kooxaha nugul ee ku jira aagagga ay mas’uul ka yihiin” ayuu yiri tababaraha hoggaaminaya iyo Sarkaalka Ilaalinta AMISOM, Gloria Jase.
Sarkaalka Jinsiga ee Booliiska AMISOM ee Kismaayo, Kormeeraha Guud ee Booliska (CIP) Grace Nutsugah, ayaa xustay in tababarada noocan oo kale ah ay noqon doonaan kuwo joogto ah si loo xasuusiyo ciidamada iyo sidoo kale inay fahmaan baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah inta lagu jiro hawlgallada milateri.
“Dhammaan waajibaadkooda, ciidamada AMISOM waa inay ilaaliyaan dhammaan waajibaadka caalamiga ah. Waxaa sidoo kale loo xilsaaray inay ka hortagaan rabshadaha la xiriira iskahorimaadka, oo inta badan saameeya haweenka ku jira bulshooyinka, si ay u caawiyaan dhibbanayaasha una gudbiyaan dawooyinka ku habboon ayaa tiri. ”CIP Nutsugah .
Askari Kenyan ah oo fadhigiisu yahay Kismaayo oo ka qaybgalay tababarka, Sergeant Daniel Mahenia, ayaa sheegay in koorsadan ay faa’iido leedahay, gaar ahaan cutubyada ku saabsan ilaalinta dadka rayidka ah.
“Waxay ahayd mid xog badan leh. Waxaa mar kale nala xusuusiyay mas’uuliyadaha naga saaran kooxaha nugul, oo ay ku jiraan haweenka, carruurta, odayaasha iyo naafada, ”ayay yiri Sareeye Mahenia.
Tababar ku saabsan ilaalinta rayidka ayaa qasab ku ah dhammaan shaqaalaha AMISOM
Previous articleLaba jir Soomaali ah oo meydkeeda laga helay gobolka Minnesota
Next articleMaxay ka wada-hadleen Ra’iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka?